तपाईंभित्रको ‘म’ खोज्नुहोस् त – Khabar Silo
पक्कै तपाईं अलमलमा पर्नुभयो । सरल रुपमा यसरी बुझौं,
तपाईंले लगाउनुभएको लुगा कसको ?
तपाईंले लगाउनुभएको घडी कसको ?
तपाईंको अधिनमा भएको जग्गा, घडेरी, गाडी, गाईबस्तु कसको ?
ठिक यसैगरी केस्रा-केस्रामा केलाउँदै जाँदा तपाईंले आफ्नो शरीर र शरीरका अंगलाई पनि ‘मेरो’ भन्नुहुन्छ । शरीर, हातखुट्टा, टाउको, आँखा, मुटु, कलेजो, फोक्सो सबै ‘मेरो ।’ अर्थात जसरी घर, गाडीलाई तपाईं ‘मेरो’ भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ, उसैगरी शरीर, मुटु, आँखा, खुट्टा पनि ‘मेरो’ भन्नुहुन्छ ।
अब स्पष्ट हुनुहोस् कि, तपाईंको घर जग्गा, परिवार यहँसम्म कि शरीर, आँखा, नाक, कान, फोक्सो पनि तपाईं होइन । तपाईंको हो । तपाईं अर्थात ‘म’ यहाँ विलुप्त भएको छ । आफ्नो शरीरलाई तपाईं ‘म’ भन्नुहुन्न । आफ्नो मुटुलाई तपाईं ‘म’ भन्नुहुन्न । ति सबैलाई ‘मेरो’ भन्नुहुन्छ । अब तपाईंको शरीरभित्र ‘म’ भन्ने तत्व कहाँ छ ?
कसलाई तपाईं ‘म’ भनिरहनुभएको छ ? शरीर त ‘मेरो’ हो । ‘म’ चाहि को हो ?
तपाईंले ‘म’ भनिरहेको तत्व कुनै ठोस र भौतिक छैन । त्यसलाई तपाईं देख्नुहुन्न, अनुभूत मात्र गर्नुहुन्छ । तपाईंको शरीरभित्र ‘म’ भन्ने तत्व छ । यद्यपी त्यो तत्व अदृश्य छ । न छुन सकिन्छ, भ देख्न सकिन्छ, न भेट्न सकिन्छ ।
तपाईंको शरीर खोतल्दै जाँदा वा शल्यक्रिया गर्दा छाला, मासु, हड्डी हुँदै भित्री अंगहरु फेला पारिन्छ । जस्तो फोक्सो, मुटु, कलेजो, आन्द्रा, भुँडी, मिर्गौला इत्यादि । त्यहाँ तपाईंले कहीँपनि खोजेर देख्नुहुन्न ‘म’ । तर, सधै वा हरपल तपाईं आफुलाई ‘म’ भनेर बाँचिरहनुभएको छ ।
‘म’ जसलाई हामी ‘आत्मा’ भनेर व्याख्या गर्छौ । शरीरभित्र यो कहाँ बसेको हुन्छ ? हामीलाई थाहा हुन्न । तर, सम्पूर्ण शरीर नै ‘म’बाट नियन्त्रित हुन्छ ।
तपाईं को हो ? भनेर सोध्दा जवाफ यस्तो आउँछ ।
म फलानो (नाम) , फलानोको छोरो, फलानो वंशको, फलानो ठाउँको, फलानो खानदानको । ति सबै तपाईंलाई चिनाउने नाम हुन् । तपाईंका लागि ति सबै ‘मेरो’ हुन् । मेरो नाम फलानो, मेरो पिताको नाम फलानो । मेरो घर, मेरो खानदान, मेरो वंश । सबै ‘मेरो’ । अतः यी सबै अस्थायी हुन् ।
‘म’ मात्र तपाईंभित्रको स्थायी चिज हो । शरीर र ‘म’ भिन्न हुन् । शरीर ‘म’ होइन भन्ने कुरा बोध भएपछि तपाईं शरीर-सुख एवं भोगका लागि मरिहत्ते गर्नुहुन्न ।
हामी झुट बोल्छौ । छल गर्छौं । अन्याय गर्छौ । यी सबै गर्ने हाम्रो इन्द्रियले हो । हामीभित्र जुन ‘म’ भन्ने तत्व हुन्छ, त्यसले कहिल्यै झुट बोल्दैन । हामी अरुलाई छल्छौ, झुट बोल्छौ । तर, शरीरभित्रको ‘म’ले भनिरहेको हुन्छ, तैंले झुट बोलिस् । तैंले खराब गरिस् । तैले गर्न नहुने गरिस् । खान नहुने खाइस् ।
हामी अरुलाई छल्न सक्छौं, भ्रममा पार्न सक्छौ । तर, आफुभित्रको ‘म’लाई छल्न र भ्रममा पार्न सक्दैनौ ।
‘म’ सत्य हुन्छ । त्यही सत्यको आडमा बाँच्ने हो भने न हामी डराउनुपर्छ, न हच्किनुपर्छ, न भ्रमित हुनुपर्छ, न कमजोर हुनुपर्छ, न दुःखी हुनुपर्छ । यसका लागि ‘म’को अस्तित्वलाई बुझ्न जरुरी छ ।
जब हामी आफुभित्रको ‘म’लाई अनुभूत गर्छौ, तब यो तेरो, यो मेरो भन्ने भेदभावबाट मुक्त रहन्छौ । सबै आफ्ना लाग्छन् । सबै पि्रय लाग्छन् । किनभने शरीर पनि स्थायी छैन । यो हाम्रो हो तर हामीसँग सधै रहँदैन । मुटु, कलेजो, मिर्गौला पनि स्थायी छैन । आँखा, कान, मुख स्थायी छैन । यी सबै नष्ट भएर जाने हो । त्यसैले हामी घृणा, अहंकार, रिस, रागलाई किन स्थायी रुपमा अंगाल्ने ?
‘म’ अर्थात आत्मा । श्रीमदभागवत गीतामा भनिएको छ, ‘आत्मा अजन्मा (नजन्मिएको), नित्य (अपरिवर्तनशिल), सनातन र पुराण (प्राचिन) हुन्छ । शरीर बद्लिन्छ, तर आत्मा अजर हुन्छ । अविनाशी हुन्छ । आत्मा नित्य सर्वव्यापी, अपरिवर्तनशिल, अचल र सनातन छ ।’
कास्की पाटी -:हिन्दु धर्मशास्त्र महाभारतमा उल्लेख भए अनुसार एक पटक युधिष्ठिरले श्रीकृष्णलाई प्रश्न गरेका थिए ,घरमा सधैं सुख समृद्धि रहोस् अनि धनधान्यको कमी नहोस् भन्नका लागि के गर्नुपर्छ ?’घर आएका पाहुनालाई पानी पिउन दिँदा अशुभ ग्रह टर्छन् । त्यसैले कोही घरमा आउनेबित्तिकै पहिला पानी दिनुस् ।महलाई पवित्र खाद्यान्न मानिएको छ । यसले घरबाट नकारात्मक ऊर्जा […]
काठमाडौँ । सामान्यतयाः मानिसहरू कसैलाई पेच पर्नेगरी भन्नुपर्यो भने भन्छन् कि पैसा रूखहरूमा फल्दैन् रु तर रूखमा पैसा नफलेपनि वास्तुशास्त्रका अनुसार त्यस्ता रूख र बोटहरू बताइएको छ, जसले घरमा पैसा बढाउन सहयोग गर्छन। शास्त्रमा त्यस्ता रूख र बोटहरूलाई सम्पन्नता र समृद्धिसँग सम्बन्धित छन् भनिएको छ । हामी तपाईंलाई ५ त्यस्ता रूख र बोटहरू बताउँदैछौं जसले […]